१४ वर्षीया कुमारी केटी कबितालाई चिकेको कथा
केही दिन अघि घिमिरेको बुरी कोपिलालाई घरमा गएर चिकेको थिएँ । उसको १४ बर्षको सेक्सी छोरी पनि थियो । स्कूल विदाको मौका पारेर एक दिन म घिमिरेको घरमा आफ्नो कुन्ठित मनोकांक्षा पूरा गर्न भनेर छिरें । सधैँझैँ कोपिला घरमै थिइन् । कविता पनि टिभीमा कार्टुन र्हेदै थिइन् । म गएर उनीहरुको सोफामा बस्ने बित्तीकै कविता चल्न आइपुगिन् । फुच्ची घरी मेरो कान तान्थी घरी उसको गुडिया मेरो मुखमा दल्दिन्थी । केटीका भरखर उठेका दूधका मुन्टा टिर्सटबाट प्रस्ट देखिइरहेको थियो । पल्केको झिल्के घरीघरी मिल्के भनेझै मेरो पापी मन उद्वेलित हुन थाल्यो । मैले कोपिलालाई आँखा सन्काएँ ।
“ए कबु तिमी अंकलसँग बस्दै गर है म मासु पसलसम्म पुगेर आउँछु” भन्दै कोपिला बाहिर निस्किइन् । उसले भरैको लागि मेरो निम्ति मासु लिन जान लागेका थिए ।
“आज मासु ल्याउने हो मम्मी” उसले बाल सुलभ प्रश्न गरी । “हो” कोपिलाको मुखबाट डर मिश्रित स्वर निस्कियो र उनी घ
रबाट बाहिर पनि निस्किहालिन् । आमा निस्केपछि कविता फेरि मसँग चल्न थालिन् । चल्दा चल्दै दुबै हात च्याप्प समातेर “कति चल्छौ हँ स्वास्नी बनाउँछु अनि” भने । “जान्छु होला यस्तै सँग” भन्दै मेरो हातमा दुख्ने गरी चिमोटेर उनी बेड भएतिर भागिन् । म मूडमा थिएँ । उसैका लागि भनेर ठूलो खालको क्याटबरी ल्याइदिएको थिएँ ।
“यी लेउ क्याटबरी” पकेटबाट क्याटबरी झिक्दै मैले उनलाई आफूतिर आकर्षित गरेँ ।
१४ र्वषकी किशोरी चक्लेट भनेपछि आकर्षित भईहाली । क्याटबरी खाने भए त मेरो काखमा बस्नु पर्छ नि - मैले भनेँ । उनले मेरो प्रस्ताव स्विकार्दै - “हस” भन्दै आई । मैले उसलाई क्याटवरी थमाएर आफ्नो काखमा राखें । उ क्याटवरीर्को यापर खोलेर अलि अलि गर्दै खान थाली । म भने उसको भरखर उम्रिएका दूधमा हात पुर्याएर पञ्जाले बिस्तारै थिच्न थालें । दुईचार पटक बिस्तारै बिस्तारै थिच्दा उसले कुनै प्रतिक्रिया नजाएपछि मेरो हौसला बढ्यो र दूध मोल्ने क्रम बढाएँ । मेरो लाडो उत्तेजित हुन थाल्यो । यी सब कुराबाट अनभिज्ञ जस्तो हुँदै ऊ भने क्याटबरी खाइरहेकी थिई ।
“मलाई चाईँ क्याटवरी नदिने” दूध माड्दै मैलै भने । “यी लिनुन त” क्याटवरीको एक टुक्रा भाँचेर दिदैं उसले भनी । मैले भनेँ - “म त तिम्रो मुखभित्रबाट मात्र खाने ।" मेरो भनाई सुनेर उनले हाँस्दै भनि - “छ्या जुठो पनि खान्छन त ।" “खाइहाल्छु नि लौ ! मुखमा राख न मात्रैै मैले भनें । उसले दाँतले टोकेर म तिर मुख दिई । मलाई क्याटबरी खानु त के थियो र । उसको कलिलो ओठ चुस्नु थियो । कलिला ओठ त्यसमाथि क्याटबरीको गुलियो लागेको । मेरो उत्तेजना चरम बिन्दूमा पुग्यो । यतिखेरसम्म उसलाई काखमा राखेर उसको हिपमा मेरो लाडोलाई दलिरहेको थिएँ ।
“कबिता अब छिराउँ है” उत्तेजनाले चरम सीमा नाघेकाले मैले भने । भनिन्छ केटीहरुमा १२ वर्षदेखिनै यौन चाहना आउन थाल्छ । मैले १०/१५ मिनेटदेखि दूध मोल्दै पछाडिबाट लाडो दलेकाले उसका पनि गाला राता हुन थालिसकेका थिए । उसले फ्रक खोली । भरखर उम्रन थालेका कैला रौ पुक्क परेको पूती । यो देखेर मलाई त कतिखेर उसको पुतिभित्र लाडो छिराउँ जस्तो भयो । मैले उसलाई बेडमा उत्तानो पारें । “बिस्तारो ल अंकल दुख्छ ।” मैले उसका तिघ्रा फैलाएर मेरो लाडो पसाउनै आँटेको थिएँ उसले भनिहाली । “पहिले पनि यस्तो गरेकी थियौ र ?” मैले आफ्नो लाडोले उसको पूतीमा छुँवाउँदै सोधें । “अँ एक पटक सूरजसँग” - उसले भनी । ओहो १४ र्वषकी केटी स्वाद लिन भ्याइसकेकी मनमनै मलाई लाग्यो । “को सूरज” मैले धक्का लाडो उसले उसको पुतीको दुलोमा धक्का दिँदै सोधें । “मेरो स्कूलको सा…आअअ…थी… ऐया ! दुख्यो क्या” एक पटक ढोका खुलिसकेको उसको कलिलो पूतीमा पहिलो धक्कामै लाडो स्वाट्टै पस्यो । म माथिबाट धमाधम धक्का दिन थालें ।
कच्याक… कच्च… कच्याक्क… क्वाँच… क्वाँच खाट कराउन लाग्यो । “अंकल… ऐया! आथ्था पोल्यो मलाई छोड्नुन प्लिज, हजुरको त ठूलो रैछ दुखायो झिक्नुन न हजूरको… मम्मि हौ मरेनी…!” उसको मुखबाट चित्कार निस्किइरहेको थियो । “पखन कब्बु एक छिन त हो नि । म तिमीबाट पूरा आनन्द लिन्छु । एकछिन सही देउन भन्दै मैले आफ्नो ओठ उसको मुखमा जोडेर उसको ओठ चुस्न ल्वाम ल्वाम चिक्न थालेँ । उसको कलिलो छातीका दूध पनि माड्दै थिएँ । उत्त्जना झन् झन बढ्दै थियो । उसको मुखबाट “गूँङ… गुङ…” आवज निस्कदै थियो । ऊ केही भनिरहेकी थिइ तर मेरो मुख उसको मुखैमा जोडिएको र म उस्को जीब्रो चुसिरहेकोले आवाज आइरहेको थिएन । २० मिनेट मच्चिएपछि मेरो लाडो स्खलित भयो । फच्याक्… फच्च्याक… फच्च… फच्च… फुसी झरेपछि यसो हेरेको कविता त आँखा चिम्म गरेर सिथिल भइरहेको रहेछ ।
* यो कथा काल्पनिक हो । बाल यौन दुर्ववहार अन्त्य गरौँ ।
१४ वर्षीया कुमारी केटी कबितालाई चिकेको कथा 2016-11-03T18:27:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Bikas Gurung
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: १४ वर्षीया कुमारी केटी कबितालाई चिकेको कथा